Gacan-qabsasho-gacmeedka Wixii Wanderer-In You - Buddhatrends
Gacan-siinta-gacmeedka Wanderer Adiga
Weligaa ma ka fikirtay kabaha gacanta? Waa maxay sababta ay qaali u yihiin laakiin qof kastaa wuxuu rabaa in uu haysto? A shoemaker puts his heart and soul into designing and stitching a shoe with full care and attention; therefore, a handmade shoe is not comparable to a cold and stiff machine-made shoe.
Xaaladdan dhaqsaha badan, moodajiyadu waxay isbeddeshaa isbeddel ka dhaqsaha badan xilliyada, qofkuna wuxuu ku jiraa indho la 'oo uu ku habboon yahay oo uu noqon karo nooca ugu dambeeya. Laakiinse kuwa wax iibsadaa yaanay qulubsanayn, oo ruuxiisu waa ku jiri doonaa. Waxay yaqaanaan sida loo ilaaliyo shaqsiyadooda; tiyaatarka shooshada ayaa naftooda u huraya dhaqanka iyo qaabdhismeedka bulshada.
Waxaa intaa dheer, raaxada, qaabka, tayada, iyo cimilada ay bixiso kabaha gacmeedku waa suurtagal in la gaaro kabo culus oo soo saaran.
Haddii aad tahay lover of kabaha canqowga, ka dibna u diyaari si ay u qanciso by our gaar ah oo ka mid ah kabaha gacanta. Xirfadaha ayaa kala dooran kara kabaha canqowga oo dhan.
Wixii tijaabooyinka caadiga ah iyo muuqaalka muuqaalka quruxda badan, dooro kabaha qalinka canugga, kabaha gacanta, ama kabaha canqawga. U ogolow in aad lugta la hadasho.
Dareem garbaha gacantaada kabaha gacanta adigoo xiraya joonyaan dillaacsan, dhar jilicsan oo canqowga ah ama la jeexay.
Guryaha & Loafers ee qaababka Semi:
Guryuhu waa ku haboon yihiin qaababka caadiga ah ee yar yar iyo marka la labisto dharka midig; waxay ku fiican yihiin arin aan caadi aheyn iyo sidoo kale soo bandhigid rasmi ah. Roodhi suulasha ama dusha ballerina, labadaba waxay leeyihiin dareen macquul ah oo ah nimco iyo xarrago.
Guryahaaga la gashado gaaban, dharka ama qurxinta yar-yar ee loogu talagalay xad-dhaaf ah. Kabaha gacmeedka ayaa dhan oo ku saabsan sheegista xaqiiqda dhabta ah ee aad adigu iska baqdo si aad u tijaabiso muuqaalkaaga.
Heerka Qalabka Lacageed ee Lacageed:
Lama oggola wardrobe aan lahayn kabo tayo sarre leh - heerarka sare, cirifka sare, baalalka ama canjeeraha - dooro mid ka mid ah in wadnahaaga aad rabto, la dhigo wax kasta oo dabiici ah iyo dhageyso qaabkaaga shakhsi ahaaneed.
Qofka bilaashka ah wuxuu jecel yahay inuu tijaabiyo oo aan la indho-tirin caadooyinka iyo caadooyinka. Xidho ciriirigaaga iyo naadiyada adoo lugaha ku leh barkimooyin si aad u aragto xiiso leh ama labadoodaba leh a dhar gaaban, dharka mini ama maxis. U diyaargarow suuxiyahaaga!
Floral Hippie Kabaha iyo Kabaha:
Habka Boho waa wax walba oo ku saabsan midabada iyo qaababka, iyo marka lagu daro kabaha waxay aad u qancineysaa maverick adiga kugu ah. Weligaa ma khaldami kartid aruurinta kabaha qalabka retro-hippie. Dooro midka kuu oggolaanaya in aad shakhsi ahaan u muujiso sida ugu fiican.
Ku xir dhar midab leh ama u dhig mid la yaqaan 'boho plain'; Fikirkaagu ha noqdo belaayo.
Kabaha linenska, Dhismayaasha iyo Loothers:
Kaararka iyo guryo ku yaal midabyo cusub ayaa ah mid aad u jilicsan oo ka bixiya sharaf, dareemo dhallinyaro ah. Isku duuban labada dhejis ah ama gaaban, waxay u hogaansanyihiin dhirbaaxada dharka farshaxan ee ugu dambeysay waxayna u mahadcelinaysaa naftaada bilaashka ah isla waqti isku mid ah.
Haddii aad tahay qof isweydiin ah oo jecel in uu xajiyo wax fudud oo sahlan ama xawaare yaryar oo jecel tijaabinta midabada, iyo hababka; rashadan kabaha ee gacmeedkani waxay wada qabtaan dhamaantood. Our xirmidda kabaha gacanta waxaa si gaar ah loogu talagalay raaxeysiga waxayna ku siineysaa fursad aad ku muujiso naftaada gudaha Buudda dhexdeeda. Booqo annaga Homepage waayo alaabo gaar ah ayaa loogu talagalay inay muujiyaan midabkaaga dhabta ah!